जे बर मागे पनि पूरा हुने सुपादेउराली माइकाे दर्शन गरी हेर्नुस् २७ पुस मंगलबारकाे राशिफल !
January 10, 2022 N88LeaveaComment on जे बर मागे पनि पूरा हुने सुपादेउराली माइकाे दर्शन गरी हेर्नुस् २७ पुस मंगलबारकाे राशिफल !
वि.सं. २९७८ साल, पुस २७ मंगलबारकाे राशिफल मेष राशि बहुमूल्य चीजहरू सुरक्षित राख्नुहोला । व्यापार राम्रो हुनेछ। साथीभाइको सहयोग मिल्नेछ । परिवारसँग मनोरञ्जनमा समय बित्नेछ। आम्दानी हुनेछ । काम गर्न मन लाग्दैन । बाहिर जाने योजना बन्नेछ । अशुभ समाचार प्राप्त हुन सक्छ । थप भीडभाड हुनेछ। भाषणमा हल्का शब्दहरू प्रयोग नगर्नुहोला। वृष राशि रचनात्मक […]
शनि-राहुको अभिशाप दोषले पुरै जीवन बर्बाद गर्छ, बच्न अपनाउनुहोस् यी उपाय
January 10, 2022 January 10, 2022 N88LeaveaComment on शनि-राहुको अभिशाप दोषले पुरै जीवन बर्बाद गर्छ, बच्न अपनाउनुहोस् यी उपाय
कुंडलीमा रहेको अभिशाप दोषका कारण जीवनमा हरेक पाइलामा कठिनाइहरु आउने गर्दछ । शापित दोषका कारण परिवारमा निरन्तर कलह भइरहन्छ । यसका अलावा करियरमा पनि समस्या आउने गरेको छ । ज्योतिषशास्त्रमा कुंडलीका अभिशापयुक्त दोषलाई अशुभ मानिन्छ । शापित दोषको कारणले जीवनमा नराम्रो समस्याको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। यो दोषले करियर, रोजगारी, वैवाहिक जीवन र सन्तानलाई असर गर्छ। […]
यो देशमा मानिसहरु लामो आयु बाँचिरहेका छन्, थाहा छ औसत उमेर कति हो ?
January 10, 2022 N88LeaveaComment on यो देशमा मानिसहरु लामो आयु बाँचिरहेका छन्, थाहा छ औसत उमेर कति हो ?
एजेन्सी । विश्वमा सबैभन्दा बढी १ अर्ब ४० करोड जनसंख्या भएको देश चीन हाे । चीनको जनसंख्या बृद्धिको गति सुस्त भएपनि यहाँ बृद्धबृद्धाहरुको संख्या आश्चर्यजनक रुपमा बढिरहेको छ । यहाँ आगामी तीन वर्षमा औसत उमेर ७८.३ हुने छ । कोरोनाको कहर भोग्ने पहिलो देश चीनमा गत वर्षको तुलनामा आगामी तीन वर्षमा औसत मानिसको सङ्ख्या बढ्दै […]
आखिर मकर संक्रान्तिको दिन किन छोडे भीष्म पितामहले शरीर, यस्तो छ किंवदन्ती
January 10, 2022 N88LeaveaComment on आखिर मकर संक्रान्तिको दिन किन छोडे भीष्म पितामहले शरीर, यस्तो छ किंवदन्ती
उत्तरायणमा शरीर त्याग गर्दा जीवन मृत्युको बन्धनबाट मुक्ति मिल्छ। सिधै मोक्ष प्राप्त हुन्छ। यसकारण भीष्म पितामहले सूर्य उत्तरायण हुँदा देह त्यागे। माघे सक्रान्ती सांस्कृतिक पर्व मात्र हाेइन यसकाे धार्मिक महत्व पनि महत्वपूर्ण छ । मकर संक्रान्तिमा सूर्यको राशि परिवर्तन हुन्छ । यस दिनबाट सबै प्रकारका शुभ कार्यहरू सुरु हुन्छन्। मकर संक्रान्तिको महाभारतसँग विशेष सम्बन्ध छ। […]
देश परायाको खेल मैदान बनिरहेको भन्दै पूर्वराजा शाह चिन्तित
January 10, 2022 N88LeaveaComment on देश परायाको खेल मैदान बनिरहेको भन्दै पूर्वराजा शाह चिन्तित
काठमाडौं । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले नेपाल परायाको खेल मैदान बनिरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । तीन सयौं पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको उपलक्ष्यमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै पूर्वराजाले देश परायाहरुको खेल मैदान बनिसकेको खतराको अनुभूति हरेक नेपालीले गरिरहेको बताएका छन् । उनले सबैभन्दा उन्नत दाबी गरिएको तन्त्रमा जनताले सास्ती र राष्ट्रले अस्तित्वप्रति नै […]
मकर संक्रान्तिमा चम्किदैछ यो राशिको भाग्य, कस्तो रहनेछ तपाईको साता ? हेर्नुस् साप्ताहिक राशिफल
January 10, 2022 N88LeaveaComment on मकर संक्रान्तिमा चम्किदैछ यो राशिको भाग्य, कस्तो रहनेछ तपाईको साता ? हेर्नुस् साप्ताहिक राशिफल
माघे सक्रान्तिमा ग्रहहरूको राजा सूर्यकाे राशि परिवर्तन हुँदैछ र यसले सबै राशिका मानिसहरूलाई ठूलो प्रभाव पार्नेछ। यो साताको माघ १ अथवा जनवरी १४ मा सूर्यले शनि मकर राशिमा प्रवेश गर्नेछ। यससँगै सुख र सौन्दर्यको कारक शुक्र ग्रहको उदय हुनेछ । जान्नुहोस् (पुस २६ देखि माघ २ गतेसम्म) याे समयावधि सबै राशिका लागि कस्तो रहनेछ। मेष […]
माल्दिभ्समा बोल्ड बनिन् सन्नी लियोनी, यस्ताे अवतार देखेर फ्यानको होश उडायो
January 10, 2022 N88LeaveaComment on माल्दिभ्समा बोल्ड बनिन् सन्नी लियोनी, यस्ताे अवतार देखेर फ्यानको होश उडायो
सन्नी लियोनीको स्टाइलले मानिसलाई सधैं फिदा बनाएको छ । हाल उनी माल्दिभ्समा बिदा मनाइरहेकी छिन् । यस क्रममा उनले आफ्नो बोल्ड लुकले फ्यानहरूकाे होस नै उडाएकाे छ । नयाँ दिल्ली । बलिउड अभिनेत्री सन्नी लियोनीले फिल्ममा आफ्नो अभिनय र नृत्य शैलीले सबैको मन जितिसकेकी छिन् । यसबाहेक उनी आफ्नो बोल्डनेस र ड्रेसिङ स्टाइलका कारण पनि […]
विद्यालय भाेलिदेखि नै बन्द, अब परीक्षा के हुन्छ ?
January 10, 2022 N88LeaveaComment on विद्यालय भाेलिदेखि नै बन्द, अब परीक्षा के हुन्छ ?
काठमाडौ । कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि विद्यालय बन्दको निर्णय गरेको सरकारले पुस २७ गतेदेखि मंगलवार देखि नै विद्यालयहरु बन्द हुने बताएको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्ररुपमा फैलिरहेको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले भोलिबाट माघ १५ गतेसम्म देशभरका विद्यालय बन्द गर्ने निर्णष गरेको छ। मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दीपक शर्माले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कोभिड(१९ को […]
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र भोलि सिंहदरबार जाने
January 10, 2022 N88LeaveaComment on पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र भोलि सिंहदरबार जाने
काठमाडौं । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह भोलि सिंहदरबार जाने भएका छन् । उनी ३००औँ पृथ्वी जयन्तीका अवसरमा सिंहदरवारस्थित पृथ्वीनारायण शाहको शालिकमा माल्यार्पण गर्न जाने पूर्वराजदरवारका संवाद सचिव फणिराज पाठकले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी जानकारी दिएका छन् । जारी विज्ञप्तिअनुसार पूर्वराजा मंगलबार दिउँसो १२ः३० बजे सिंहदरबारको मुलगेटमा रहेको पृथ्वीनारायण शाहको शालिकमा माल्यार्पण गर्ने छन् । याे पनि […]
January 10, 2022 N88LeaveaComment on पृथ्वी जयन्तीमा सार्वजनिक बिदा दिने स्थानीय सरकारकाे निर्णय
काठमाडाैं । पृथ्वी जयन्तीका अवसरमा गोरखाको गोरखा नगरपालिका र नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाले आफ्नो नगर क्षेत्रभित्र सार्वजनिक बिदा दिएका छन्। पुस २७ मा पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकीकरण दिवस मनाइँदैछ। नगर कार्यपालिकाको पुस १८ को निर्णयअनुसार पुस २७ मा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको गोरखा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनेशराज पन्तले बताए। उनकाअनुसार नगरपालिका कार्यालय, वडा […]